काठमाडौं महनागरमा घरधनीले नै तिर्दैनन् घरबाहल कर, के गर्लान् मेयर शाक्यले ?
७८ प्रतिशतले तिर्दैनन् घरबहाल कर, कानुनको अभाव, कानुनै नभएबारे वर्षाैंसम्म के हेर्यो सरकारले ?
| 2017-06-17 Published
निर्माण सञ्चार । महानगरले नेतृत्व पाएलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका घरधनीले घरबहाल कर नतिरेको विषय बहसमा आएको छ ।
अध्यनन अनुसार काठमाडौं महानगरबासी ७८ प्रतिशत घरधनीले घरबहाल कर तिर्ने गरेका छैनन् । तिर्नेहरुमा २२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिएको छ ।
कामपा, राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले घरबहाल घर लिनका लागि ठोस किसिमको कानुन नभएको स्वीकार गरे । कानुनको अभावमा कामपामा रहेका ७८ प्रतिशतले घर बहाल घर नतिर्दा पनि राज्य मौन बसेको छ ।
हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने भाडामा बस्ने र घरपतिबीच सामान्य मौखिक समझदारी भएर भाडा लिने, दिने र बढाइने गरिएको छ ।
‘कुनै कानुनी आधारमा रहेर यस किसिमको काम हुने गरेको छैन’, प्रमुख काफ्लेले भने ।
नियमको अभाव र जनशक्तिको कमीजस्ता कारण देखाउने कामपाले कर सङ्कलन लागि यति ठूलो सम्भावना बोकेको शीर्षकमा पनि अपेक्षानुरुप कर सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।
पूर्ण रुपमा घर बहाल करसम्बन्धी ऐन नहुँदा कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार कामपालाई छैन ।
.... रासस ।
शनिबार, ३ असार, ०७४